Ckpụ ntutu na Nzuzo, Mgbapu ma ọ bụ Ahụmịhe Onye Ọrụ? | Martech Zone
Tuesday, June 12, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu-uka obula m biara na be m Ntugharị. Ọ bụghị mgbe niile ka m na-enweta ntụpọ zuru oke, mana ọ dị ọnụ ala yana ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ dị mma. Otú ọ dị, nke kachasị mkpa bụ na Supercuts na-echeta onye m bụ. Mgbe m batara, ha na-arịọ maka aha m na akara ekwentị, tinye ya na sistemụ ha, ha na-enwetakwa ihe edetu na ogologo oge nke ịkpụ ntutu ikpeazụ m yana otu m si amasị ya (# 3 gburugburu na scissor bee n'elu , guzo n'akụkụ).
Itinye ozi nke (nkeonwe) nke m nyere na-eme ahụmịhe onye ọrụ m na Supercuts ka mma ma na-eme ka m lọghachi. Mmasị na-akpali mmasị, ọ bụ? M hụrụ n'anya Ugboro ebe ha na-echeta aha m, otú m na-amasị m kọfị, otú m na-amasị m uwe elu starched, ma ọ bụ ọbụna otú m na-amasị m na ntutu ịkpụ! M na-abịa azụ ugboro ugboro n'ihi na ahụmịhe dị mma nke ukwuu. Anọ m nọrọ na họtel ụfọdụ mara mma ebe ọ tụrụ m n'anya mgbe onye nlekọta ahụ mere ọ dị mkpa icheta aha m. Ọ bụ obere mbọ ahụ na-eme ka m laghachite na ịgbasa azụmahịa m. Ndị ụlọ ọrụ na-anakọta ma jiri data na-aga nke ọma ma nwee ekele.
Ngwaọrụ m, saịtị m, na omume m n'ịntanetị ekwesịghị ịdị iche, nri? Ana m enyefe ozi… oge ụfọdụ ozi onwe m sites na saịtị na sistemụ ịntanetị iji melite ahụmịhe m na ha. Amazon Na-enyocha ihe m zụtara nke ọma wee kwado ihe ndị ọzọ m nwere ike ịmasị. Ọ bụrụ na m gaa na nnukwu blọọgụ, Google Adwords na-eso ọdịnaya nwere ike igosi m ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ m nwere mmasị na ya. Ọ bụrụ na m kwuo okwu na enyi m saịtị, enwere ike idowe ozi m na kuki ka ọ na-egosipụta ka m wee jupụta ozi ahụ ọzọ. Nke a dị egwu! Ọ na-azọpụta m oge ma nweta m nsonaazụ kacha mma. Nke a abụghị ihe ọ gbasara?
Eziokwu ahụ bụ na ịme ihe ọ bụla na ntakịrị data ị tinyere na canntanetị nwere ike iji ya iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ gị mma, abụghị nsogbu. A na-anakọta data ahụ n'afọ ofufo, n'ezie. Ikwesighi ịnakwere kuki, nbanye na weebụsaịtị, jiri ndị ọzọ, ma ọ bụ jikọọ na atntanetị ma ọlị. Nye m, nzuzo abụghị nsogbu ma ọlị, nchekwa bụ nsogbu. Nzuzo nzuzo mechara gaa Google na-enye ha ọkwa kachasị njọ na 'nzuzo'. Ka m na-agụ akụkọ ahụ, echere m na ọ bụ ihe dị nro ime. Nchịkọta data nke Google bụ naanị iji wulite ahụmịhe kachasị mma maka ndị ọrụ ya yana ijikọ azụmahịa na ndị ahịa.
Googler mara ama, Matt Cutts zara International Privacy ya na nzaghachi zuru ezu nke m chere na ọ kpọgidere ya. Google na-aru oru di egwu - mgbe oge ikpeazu inuru banyere ihe nzuzo ndi mmadu hacked ma obu weputara ya na Google?
Google anaghị ere data onye ọ bụla, ihe nlereanya ha bụ ịhapụ ndị azụmaahịa ịnweta sistemụ ha, ndị ahịa iji nweta ya, Google jikọtara ha abụọ. Nke ahụ bụ ụzọ dị ịtụnanya na nke m nwere ekele. Achọrọ m ka Google mụta ọtụtụ ihe gbasara m na ahụmịhe m na-eji sọftụwia ha na-akawanye mma kwa ụbọchị. Achọrọ m ịbịakwute ụlọ ọrụ ndị ha kwadoro m - ndị nwere ike ịnwe ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ m nwere ike ịmasị.
Kedụ ka Nzuzo International ga-esi zụta Supercuts ndị na-agbaso ugboro ole m na-eleta, ndị otu ezi na ụlọ m, na ihe ịkpụ ntutu anyị chọrọ? Ana m eche na ha ga-achọ Supercuts kwụsị ịnakọta ozi ahụ. M ga-ahụ kọwaara onwe m oge ọ bụla m gara… ruo mgbe m kwụsịrị ma hụ onye ọzọ mere na-esochi.
Echere m na ala bụ nke a… ụlọ ọrụ na- kparia ekwesiri izere data gi, ma ulo oru ndi ojiji ekwesịrị ịkwụghachi ụgwọ data gị. Akwụsịla ịchọta m, Google! Ahụmịhe onye ọrụ ị nyere m masịrị m.
M hụrụ ndị mmadụ n'anya na mgbasa ozi…
PS. Enweghị m ime ihe ọ bụla ma pịnye ozi a b ..b / c ihe ị kwuru ugbua amatala m na kọmputa m na kọmputa na laptọọpụ m. Nke ahụ dị ezigbo mma …… ọ na - eme m ka m nwee mmetụta dị mkpa.
ị na- dị mkpa! 🙂